Moa ve 2018 ny taona fampidirana ny vola iraisam-pirenena SDR mifandray amin'ny vola crypto?
Filed in BITCOIN, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 12 Desambra 2017	• 11 Comments
Tany am-piandohan'ity herinandro ity dia navoakako tao amin'ny Facebook ny pejy voalohan'ny gazety The Economist avy amin'ny 1988. Mampiseho endrika phenix iray izay manangona ny volany amin'ny volany izy. Manodidina ny vozon'ny fenix dia vola madinika volamena hita izay tena mampatsiahy ny bitcoin currency crypto. Ao amin'ity vola madinika ity no ahitantsika [...]
Ny bikan'ny bitcoin sy ny hafa dia hampifandraisina amin'ny IMF Special Drawing Rights (SDR) amin'ny alàlan'ny ACChain
Filed in BITCOIN, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 9 Desambra 2017	• 16 Comments
Raha ny olon-drehetra ankehitriny mifantoka amin'ny bitcoin mba hanao haingana ny vola amin'ny alalan'ny vola crypto, ny crypto-natrehin'ireo toa tena ho tena hanimba ny vola rafitra ambanin'ny fahatsapana crypto vola izay tsy eo ambany mafy ny banky lehibe sy ny FMI . Vola iray ampiasain'ny tsy fantatra anarana [...]
Nahoana no tsy mitaraina noho ny tsy fahampian'ny herinaratra ny Bitcoin ny firenena eto amin'izao tontolo izao?
Filed in BITCOIN, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 30 Novambra 2017	• 17 Comments
Ny Cryptocurrency as (indrindra) bitcoin dia mampiasa herinaratra be! Izany dia be loatra ka mihoatra ny herin'ny angovo avy amin'ny firenena manontolo. Ny bitmine dia mampiasa hery bebe kokoa noho ireo firenena toa an'i Irlandy sy Nizeria. Tamin'ny novambra 28 ny tranonkala Naturalnews.com dia tonga niaraka tamin'ny angovo bitcoin raha oharina amin'ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao (jereo eto). Ao amin'ny [...]
Inona no ifandraisan'i Bitcoin amin'ny 'ny maha-tokana' sy ny fanamafisana amin'ny AI?
Filed in BITCOIN, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 28 Novambra 2017	• 15 Comments
Rehefa miditra amin'ny tranga 'bitcoins' ianao, dia tonga amin'ny fanadihadiana tsotra toy ny nomeko ato amin'ity lahatsoratra ity. Izany dia mety hanome fahatsapana fototra ho an'ny bitcoin na ny cryptocurrency, fa raha ny tena izy dia fanehoana loatra ny zava-misy marina. Mihamaro ny Cryptocurrency ary manana ny zava-drehetra [...]
Moa ve ny Bitcoin sy ny 'Big Data' ny volamena vaovao na ny solika vaovao?
Filed in BITCOIN, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 27 Novambra 2017	• 8 Comments
Tamin'ny taona voalohany, ny bitcoin dia nampiasain'ireo olona izay naniry ny hanafatra ny zava-mahadomelina tsy fantatra anarana sy amin'ny alàlan'ny paositra any an-trano. Ireo izay nanomboka 7 taona lasa izay ary nanadino ny 10 euro amin'ny bitcoints dia angamba angamba ny bitcoin millionaires voalohany. Raha ao amin'ny 2010 ianao dia mandoa vola 10 euro [...]
Total visits: 14.663.717